Faahfaahin siideyntii haweenyada British-ka & lacagtii la siiyey afduubayasha+SAWIRO – SBC
Faahfaahin siideyntii haweenyada British-ka & lacagtii la siiyey afduubayasha+SAWIRO
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya qaabkii loo siidaayey haween British oo lagu magacaabo Judith Tebbutt oo maanta ay siidaayeen kooxaha burcad badeeda Soomaalida oo mudo 7 bilood haweenaydaasi afduub u haystey.
Haweenaydan oo laga qafaashay xeebta dalka Kenya ee lagu magacaabo Kiwayu Safari Village ee u dhaw Jasiirada Lamu isla markaana 40 Km u jirta xuduuda Soomaaliya ayaa kooxaha qafashay waxay keensadeen bartamaha Soomaaliya gaar ahaan agagaaraha degmada Cadaado halkaasi oo ay ku hayeen mudooyinkii ugu dambeeyey, waxaana siideynteedu ay ka dambeysay ka dib markii maalmo ka hor kooxaha burcad badeeda la siiyey lacag madaxfurasho oo gaaraya 1200,000 (Milyan iyo laba boqol oo kun oo doolar).
Lacagta madaxfurashada ayaa la sheegay inay iska ururiyeen qoyska iyo asxaabta haweenaydan, iyadoo dawlada Britain sheegtey inaanay wax lacag madaxfurasho ah siin kooxaha afduubayaasha ah.
Afduubka haweenaydan oo dhacay 11-kii September ee sanadkii 2011 ayaa xiligii uu socdey waxaa kooxaha afduubayaasha ay toogteen haweenaydan ninkeedii oo lagu magacaabi jirey David kaasi oo isla goobtii ku geeriyoodey.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in la isiidaayo, waxaa hada kaliya aan raadinayaa waa inaan arko wiilkeyga, kaasi oo si guul leh u xaqiijiyey siideynteyda, ma garan karo sida uu arinkaasi ku sameeyey, laakiin way u suurtagashay, taasi oo aheyd mid aad u weyn” ayey tiri Judith Tebbut oo 57 sano jir ah oo u waramaysay Telefishinka ITV news ee magaalada London, iyadoo intaasi sii raacisay in dableyda afduubka u haysatey ay si wanaagsan ula dhaqmeen.
Qaabka lacagta lagu gaarsiiyey burcad badeeda
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in kooxaha burcad badeeda Soomaalida ee haweenaydan afduubka u haystey lacagta madaxfurashada ee gaaraya 1.2 milyan la gaarsiiyey maalmo ka hor iyadoo diyaarad dusha uga tuurtey, waxaana markaasi ka dib burcadu ay haweenaydaasi ku wareejiyeen maamulka deegaankaasi, taasi oo ku timid wadaxaajood mudo bilooyin ah socdey oo ku aadanaa siideynta duqdan.
Judith oo ku labisan dharka baatiga madaxana uu u saaran yahay masar shaash ah oo ay inta badan hablaha Soomaaliyeed ku labisantaan ayaa diyaarad saaka lagaga qaaday degmada Cadaado oo 50 KM u jirta xuduuda Itoobiya, magaalada Muqdisho ee caasimada ahna u jirta 500 Km, waxaana lagu wareejiyey saraakiil ka socotey safaarada Britain ee magaalada Nairobi.
“Si wanaagsan ayaa la iila dhaqmay, si wanaagsanna waan u seexan jirey, laakiin sadex jeer oo ka mid ahaa intii afduubka la ii haystey ayaan xanuunsadey, balse daaweyn ayaan helay si deg deg ah, waana ku caafimaaday” ayey tiri Judith Tebbutt.
“Xaaladeyda inta aan ka warqabo waan wanaagsanahay, waxaan dareemayaa wanaag, wax tacadi ah la iima geysan, sida dhabta ah ilaa iyo sida ugu macquulsan ayay iila dhaqmeen afduubayaashu waxayna isku dayayeen inay iga ilaaliyaan dhaqan xun, isla markaana aan ku dareemi karo deganaansho” ayey hadalkeeda sii raacisay Tebbutt.
“Muwaadiniin Soomaali ah oo haysta dhalashada UK ayaa dadaal weyn ka qaadatey sidii loo siideyn lahaa haweenaydan kuwaasi oo ku lug lahaa wadaxajoodka keenay in la siidaayo Tebbutt” ayuu yiri Daud Ali, oo degan degmada Cadaado oo u waramayey wakaalada wararka ee AFP.
Mohamud Ibrahim, oo isaguna ka mid ah duqeyda dhaqanka ee deegaankaasi ayaa geestiisa sheegay in wadaxaajoodka siideynta haweenaydan uu bilowdey wax yar uun ka dib markii afduubku dhacay.
Mowqifka Xukuumada Britain ee afduubkan
Afhayeen u hadley Ra’isalwasaaraha Britain David Cameron wuxuu sheegay in dawlada UK aanay ku jirin siyaasadeeda in ay afduubayaasha siiso lacag madaxfurasho ah, isla markaana aanay ka shaqeyn bixinta madaxfurashada.
Qofka kaliya ee aduubkan u xiran waa Ali Babitu Kololo oo 25 sano jir ah
Booliiska Kenya ayaa su’aalo waydiinaya oo xabsi ku haya Ali Babitu Kololo oo 25 sano jir ah kaasi oo ahaa shaqaalaha Hotel-ka afduubku uu ka dhacay, waxaana ninkan lagu eedeeyey in uu gacan siiyey kooxaha afduubayaasha Soomaalida, balse wuxuu dafiray eedeymaha loo haysto isagoo sheegay in afduubayaashu u hanjabeen oo aanu wax warbixin ah aanu siin.
waa fiican thay kuwo xabsiyada lagu ilaaway ya ka naxaya waa lagana nxay habarta